Rafitra fanodinam-paratra Hydraulika - Mpamatsy rafitra mpanova efijery fanodinam-bola ao Shina, orinasa –Jwell
Andian-tsarimihetsika fanodinana efijery tokana:
● Tsy misy firafitra tombo-kase mekanika, izay afaka miantoka ny tsindry avo sy ny toetr'andro avo fa tsy ny fitaovana mitete. Mampihena ny fanoherana ny efijery fanovana, mampihena ny tsindry ny fiasan'ny rafitra hydraulic.
● Ny firafitra iray, tsy misy aperture, manamafy ny tsindry mitondra, ataovy avo kokoa ny tsindry mavesatra amin'ny rafitra.
● Mampiasa vy vita amin'ny alimina avo lenta, aorian'ny fizotran'ny nitrida hanitatra ny androm-piainan'ny vokatra.
● Varingarina menaka injeniera tsy miankina, androm-piainana maharitra.
● Aorian'ny fanatsarana ny rheological amin'ny alàlan'ny takelaka finday, mba hampihenana ny fanetezana tsiranoka amin'ny fitrandrahana.
● Fampiasana fitaovana fanamafisana anaty, ho an'ny fiarovana angovo azo antoka. Tariby mifono feno, ho an'ny fisehoana kanto.